News Collection: चपली हाइटभित्रका तीन छलछाम...!
चपली हाइटभित्रका तीन छलछाम...!
सुपरहिट भनिएको चलचित्र चपली हाइटले आक्रमक कलेक्सन गरेपनि यसका निर्माताले बितरकबाट पैसा नपाएको बताएका छन्। दुई करोड बढी ग्रस कलेक्सन गरेको फिल्म चपली हाइटका निर्माता अर्जुन कुमारले वितरक वीरेन्द्र महर्जन र वीरेन्द्रनारायण श्रेष्ठबाट हिसाबकिताब नपाएको बताउँदै यसका कारण आफ्नो आगामी प्रोजेक्ट 'फाटेको जुत्ता' निर्माणमा अवरोध भएको बताए।
''फिल्म प्रदर्शन भएको पनि यत्ति धेरै दिन भइसकेको छ, अझैसम्म हिसाबकिताब पाएको छैन। विभिन्न हलबाट पनि पैसा उठाइसकेका छन् अझैसम्म मलाई दिएको छैन'', अर्जुनले भने, ''केही समय अझै कुर्ने र नपाए पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विषयमा सार्वजनिक गर्छु।'' हिसाबकिताव नभएपछि फिल्मले कति कमायो, कति खर्च गर्‍यो भन्ने नै थाहा नभएको पनि उनले बताए।
सेक्स रिभेन्ज स्टोरी चपली हाइटले प्रदर्शनको सफलतापूर्वक ५१ औं दिन पनि मनाएको थियो। विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रदर्शन भइसकेको फिल्म चपली हाइट, लुट, पछि धेरै कमाउने फिल्ममा पर्छ। सो फिल्म पछिल्लो पटक इजरायलमा प्रदर्शनमा आएको थियो। अझै आधा दर्जन मुलुकमा यसको प्रदर्शन गर्न लागिएको निर्माता अर्जुनकुमारले बताए।
फिल्मका वितरक वीरेन्द्र महर्जनले केही स्थानबाट अझै पैसा उठ्न बाँकी रहेकाले हिसाब किताब हुन बाँकी रहेको बताउँदै २० लाख रुपैयाँ निर्माताले लिइसकेको बताए।
यस्तै फिल्मका निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालले आफूले चपली हाइट निर्देशन गरे वापतको पारिश्रमिक पनि नपाएको बताएका छन्। ''फिल्म निर्देशन बापतको पारिश्रमिक अझैसम्म पाएको छैन। सायद हिसाबकिताब मिल्दै गरेर होला'', उनले बताए। तर निर्माता अर्जुनकुमार निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाललाई निर्देशनको पारिश्रमिक बापत ५ लाख बुझाइसकेको बताए।
त्यस्तै चपली हाइटलाई भारतको एक कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँमा अधिकार खरिद गर्ने भनिए पनि त्यसको अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन। निर्माता अर्जुनकुमार भने अहिले यो विषयमा खासै बोल्न चाहँदैनन्। हाम्रो जिज्ञासामा उनले भने, ''मौखिक कुराकानी भएको हो। तर प्रक्रिया ढिलो भैरहेको छ।''